mousenost Wart dises by zawlin htwe - issuu
ကြွကန်ု့ဟို ခေါ်သော Wart ရောဂါ စာရေးသူ....သက်တန်ခ့ျို(၁၁း၃၅ ည ၈.၁၁.၀၉) Wart ဆိတုာဘာလဲ ?
၀ါ့တဆ်တိုာဟာ မြန်မာလို အခေါ်တော့ ကြွကန်လိုို့ ခေါ်ပါတယ် ။ သူက သေးငယ်ပြီး မာကျောတဲ့ အစိ အလံုး လေးတွေ အထူးသဖြင့် လက်တွေ ခြေထောက်တွေမှာ အဖြစ်များလေ့ရြှိ ပီး တခါတရံမှာတော့ အခြားနေရာတွေမှာ ပါ ဖြစ်လေ့ရိပှါတယ် ။
ကြွကန်ဟို့ာအဖြစ်များလေ့ရြှိ ပီး အရည်ကြည်ဖပုံစံ ဒါပေမယ့် အခဲစေိလးတွေ
ဖြစ်ပါတယ် ။ အဓိကကတော့ ဗိငုး ရပ်စ် ပိုးဝင်တအဲ့ တွက်ေကြာင့် ဖြစ်ပါတယ် ။ ဗိငုး ရပ်နာမည်ကေို တာ့ Human papillomavirus (HPV ) လို့ခေါ်ပါတယ် ။ ရောဂါ ရှေိနသူရဲ့ အရေပြားနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်နေမိရင်ထမိရိင် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ကြွကန်ို့ ဖြစ်နေသူရဲ့ လက်သတုပ်ဝုါတွေ အခြား
ပစ္စည်း တွေကို သံုး မိရင်လည်း ဖြစ်နငိုပါတယ် ။ သူတဟို့ာလအနည်းငယ်မှာ ပြန်ပျောက်တတ်ပေမယ့် နှစ်ေပါင်း များစွာတိုင်ေအာင်လည်း ဆက်လက် ဖြစ်နငို ပ်ါသေးတယ် ။
ကြွကန်ဘို့ာကြောင့် ဖြစ်စေသလဲ ? ၀ါ့တဟ်ာ Human papilloma virus - HPV လို့ခေါ်တဲ့ ဗိုင်း ရပ်စပ်ိးု ကြောင့် ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီ HPV အမျိုး
အစားပေါင်းကလည်း ၁၃၀ လောက် ရှေိနပါသေးတယ် ။ အဖြစ်အများဆံုး ကတော့ type 1 , type2နဲ့ type3တို့ ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ Type 1 ကတော့ ခြေဖ၀ါးတွေ လက်ဖ၀ါးတွေမှာ ဖြစ်လေ့ရတှိဲ့ ကြွကန်ပိုဲ့ဖြစ်ပါတယ် ။
Type2ကတော့ ကြွကန်အို့ မျိုးမျိုး အထူးသဖြင့် မျက်ခွေံ တွပေါ်မှာ အသားပိဖုေုလးတွေအနေနဲ့ ထွက်ေပါ်လာ တတ်တဲ့ Filiform warts , နဲ့ mosaic plantar warts တွေပြဲ ဖစ်ပါတယ် ။
Type3ကတော့ ပြင်ညြီ ကွကန်pို့ lane warts တွေဖြစ်ပြီးသူတကိုို့ ကြွကန်ြို့ ပား flat warts လို့ အသိများပါတယ် ။
စအိဝုနဲ့ မျိုးပွားလမ်းကြောင်းမှာ ဖြစ်လေ့ရတှိဲ့ ကြွကန်ိ့ေုတွကတော့ type 6, 11, 16, 30, 34 , 35 , 39 , 40 စတဲ့ ဗိငုး ရပ်စ် အမျိုးအစားတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ် ။ Type6နဲ့ 11 ကတော့ မျိုးပွားလမ်းကြောင်း ကြွကန်ကိုို့ ၉၀% ထိ အဖြစ်များစေပါတယ် ။
Type 16 နဲ့ 18 ကတော့ လတ်တလော မှာတော့ သားအိမ်ေခါင်းကင်ဆာ ကို ၇၀% ထိ ဖြစ်ပွားစေပြီး မိန်း မကိယု အပြင်အတွင်း
ယောက်ျားအင်္ဂါ နဲ့ စအိကုင်ဆာတွေ ကို ဖြစ်ပွားစေပါတယ် ။ ကြွကန်ို့ အမျိုးအစားတွေက ဘာတွေလဲ ?
သူရ့ဲ့ ပံသုဏ္ဍာန်နဲ့ နေရာပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးအစားပေါင်းမြောက်များစွာ ရှိပါတယ် ။ ဖြစ်ပွားစေတဲ့ ဗိငုးရပ် အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး တော့လည်း ကြွဲ ပားပါသေးတယ် ။ အဲဒထီကဲမှ ၁ ။ အဖြစ်များဆုံး ကြွကန်(ို့ Veruca vulgaris ) - ကြမ်းတမ်းတဲမျ့က်နှာ
ပြင်ရြှိ ပီး အသားပြင်ညမှီ အပေါ်ကို မြင်တ့တ်နေလေ့ ရြှိ ပီး အထူးသဖြင့် လက်နဲ့ ဒူးခေါင်းမှာ အဖြစ်များပါတယ် ။
၂ ။ ကြွကန်ြို့ ပား (Verruca plana) - သေးငယ်ပြီး ချောမွတြ် ပီး ပြားတဲ့ မျက်နှာ ပြင် ရှိပါတယ် ။ လူအ့  ရေပြားအရောင်ပဲ ဖြစ်ပြီး အရေအတွက် အများကြီးပေါက်တတ်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် မျက်နှာတွေ လည်ပင်းတွေ လက်ကောက်ဝတ်တွေ နဲ့ ဒူးခေါင်းတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ် ။
၃ ။ မျက်ခမ်းစပ်ကြွကန်(ို့ Filiform or Digitate wart ) - သူကတော့ လက်ချောင်းပံစုံ အပ်ချည်ပစုံရြှိ ပီး မျက်နှာမှာ အထူးသဖြင့် မျက်ခအွံ နီး
နှတုခ်မ်းအနီးမှာ ပေါက်လေ့ရပှိါတယ် ။ ၄ ။ Plantar wart (verruca , Verruca pedis) - မာကျောပြီး တခါတရံ နာကျင်တဲ့ အလံုး ပံစုရံပှိါတယ် ။ တခါတရံ များပြားတဲ့ အမဲစက်လေးတွေက ကြွကန်ို့ အလယ်မှာ ရှေိနတတ် ပါတယ် ။ သူက့ိုတော့ အဖိခရံတဲနေ့ရာ အထူးသဖြင့် ခြေဖနောင်မှ့ာ သာလျှင် တွေရ့  ပါတယ် ။ ၅ ။ Mosaic wart - planter wart တွေချည်း စုစည်ထားတဲ့ အစုတစ်ခြု ဖစ်ပြီး လက်နဲ့ ခြေဖ၀ါးမှာ အဖြစ် များပါတယ် ။
၆ ။ မျိုးပွားအင်္ဂါ ကြွကန်ို့ (venereal wart , Condyloma acuminatum , Berruca acuminata ) သူကတော့
မျိုးပွားအင်္ဂါမှာသာ တွေ့ရလေ့ ရှပိါတယ် ။ ကြွကန်ကိုို့ ဘယ်လကိုမလဲ ? ကြွကန်ဖို့ ယ်ရှားတဲ့ ကုသမှုတွေ အများကြီးရှပိါတယ် ။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားတဲ့ လေ့လာတွေရ့  ချှိက်တွေအရ
နိငုင်ေံပါင်း ၅၂ နိငုင်မှံ စမ်းသပ်မှေုတွမှာ အပေါ်ယံလမိ်း ပေးရတဲs့ alicylic(ဆယ်လဆီလစ်) acid ပါဝင်တဲ့ ဆေးတွေက အကောင်းဆံုး ဖြစ်ပါတယ် ။ သူက အခြားဆေးတွေနဲ့စာရင် ၇၅% လောက်ကို
ပိကုသုမှုနနှုးကောင်းပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် salicylic acid ပေါ်မှာ cryotherapy ပေးခြင်းသိမု့ ဟုတ် ပလာစတာတိပ် (duct tape ) ကပ်ခြင်းကလည်း ပျောက်ကင်းစေနိင်ုပါတယ် ။ အခြားနည်းလမ်းတွေကတော့
၁ ။ podophyllum resin paint လိေု့ ခ်ါတဲ့ လိမ်း ဆေးလိမ်း ပေးခြင်း
၂ ။ Imiquimod လိမ်း ဆေးကတော့ ခန္ဓာ ကိယုရ်ဲ့ ခုခအာံးကိတုက်စေပြီး ကြွကန်ြို့ ဖစ်စေတဲ့ ဗိငုး ရပ်ကို တိကု ထုတ် ပေးနိငုပ်ါတယ် ။ ဒါပေမယ့် US FDA ( အမေရိက ဆေးဝါးနဲအ့  စားသောက်ဆငို ရ်ာ ခွငြ့် ပုချက်)တော့ မရသေးပါဘူး ။ ဈေးလည်းအရမ်းကြီးပါတယ် ။
၃ ။ Cantharidin ဆိတုာကတော့ ပိုး တောင်မာဖြစ်တဲ့ Meloidae အကောင်ကနေ သဘာဝအတိငုးတွေတ့ဲ့ ဓါတုပစ္စည်း
ဖြစ်ပါတယ် ။ သူက့ို podophyllin နဲလ့  ည်းရောသံုး နိငြု ပီး သူဘ့ာသာ
သီးသန်လ့  ည်း သုံးနိငုပ်ါတယ် ။ သူလည်း FDA ထောက်ခချံက်မရသေးပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ကနေဒါနဲ့ အမေရိက အချိုေ့  သာ ဆေးဝါးဆိငုေ်တွမှာ ရနိငုပ်ါတယ် ။
၄ ။ Bleomycin ကလည် US FDA မရသေးပါဘူး ။ ထိုး ဆေး တစ်ခါ သို့မဟုတ် နှစခ်ါလောက်တော့ ထိုးရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူက ခြေချောင်းလက်ချောင်းတွေကို ပုပ်ေစပြီး Raynaud ရောဂါကို ဖြစ်စေပါတယ် ။ ဈေးကြီးပြီး USD$ 200-300 လောက်ရပှိါတယ် ။
၅ ။ Salicylic acid ကဲသို့ Dinitrochlorobenzene (DNCB) ကလည်း ကြွကန်အို့ ပေါ်ကို တိကုရ်ကိုလိမ်း ပေးရတာပါ ။
သူကလည်းကောင်းတော့ကောင်းတယ် ဒါပေမယ့် Salicylic acid ထက်ကို သတိထားပြီး သံုး ရပါတယ် ။ သူက့ို Mutagen လိေု့ ခ်ါပြီး gene တွေကို
ပံေုပြာင်းသွားစေပါတယ် ။ ခန္ဓာကိယုက်ို ယားယံရောင်ရမ်း လာစေပြီး ကြွကန်ြို့ ဖစ်စေတဲဗို့င်းရပ်ကို တိကုထ်တုပ်စ်တဲ့ နည်းဖြစ်ပါတယ် ။
၆ ။ Fluorouracil ကတော့ ဗိငုးရပ်ရဲ့ ဒီအန်အေကို ပျက်ဆီး စေပါတယ် ။ သူကတော့စမ်းသပ် တဲက့သုမှုတွေမှာ အသံုး များပါတယ် ။ သူက့ို ကြွကန်ေို့ ပ်ါမှာ တိက်ုရကိုလိမ်း ပေးနိင်ုပါတယ် ။ Planter warts တွေမှာ ပေါ့ ။ သူက pumic stone နဲ့ တွသဲုးံ ရပါတယ် ။ ဖြည်းဖြည်းချင်းအလုပ် လုပတ်အဲ့ တွက် ပျောက်ကင်းချိနြ် ကာပါတယ် ။
၇ ။ Salicylic acid ကတော့ တစ်ကမ္ဘာလံုး မှာ တိငုး ပြည်တုငိ်း မှာ အသုံးများနေတဲ့
ကြွကန်ကို့ သုတဲဆေ့း ဖြစ်ပါတယ် ။ သူက့ို Elorac ဆေးကုမ္ပဏကီနေတင်သငွ်းပြီး Durasal ဆိတဲ့ နာမည်နဲ့ ရရှနိုငပ်ါတယ် ။
mousenost Wart dises
Wart ဆိုတာဘာလဲ ? စာရေးသူ....သက်တန့်ချို(၁၁း၃၅ ည ၈.၁၁.၀၉) ကြွက်နို့ အမျိုးအစားတွေက ဘာတွေလဲ ? ကြွက်နို့ဘာကြောင့် ဖြစ်စေသလဲ ? အခြားနည်းလမ်းတွေက...